TELMA SUPERCOUPE : Nandiso fanantenana ny mpitia kitran’i Mahajanga ny Fosa Juniors
Nifanohitra tanteraka tamin’iny lalao famaranana ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara, izay nandresen’ny ekipan’ny Fosa Juniors ny ekipan’ny Cosfa ka nahatonga azy nahazo ny anaram-boninahitra tamin’ny taon-dasa iny ny fihaonana tamin’ny Cnaps sport, ny alahady teo tao aminy kianja Rabemananjara. 16 janvier 2018
Lalao mandroso no notontosaina ka nifanandrinan’ny Cnaps sy ny Fosa izao. Nisaraka samy tsy nitoko 0 noho 0 ny roa tonta tamin’izany, izay nilazan’i Typé tamin’io lalao io fa fahombiazan’izy ireo iny lalao mandroso iny. Nampanantena vokatra tsara lavitra mihotra ny vita teto Mahajanga mandritra ny lalao miverina hatao ny sabotsy 20 janoary izao ao aminy kianja complexe Sportif Cnaps Vontovorona Antananarivo.
Hampitombo ny herijikan’izy ireo ny hampiantranoany io lalao miverina afaka herinandro, noho izy hilalao eo an-jaridainany, hiampy ny fanohanan’ireo mpanohana azy, izay hery faharoa hanampy ny mpilalao eny ambony kianja ihany koa izany, hoy hatrany i Maitre Typé. Somary nanohina ny mpitia baolina kitra, izay nifanitsakitro tao amin’ny kianja Rabemananjara ary nanakianan’ireo mpankafy ny mpilalaon’ny Fosa ny nandaharan’ilay mpanazatra Hollandais an’i Dax sy Julieny, izay nampitazonina ny toeran’ny “extreme”, izay tsy tokony ho izany mihitsy, araka ny fihevitr’izy ireo.
Ankoatra izay dia ny tsy nampilalaovina ireo mpilalao sasany nisongadina nahafahana nandresy ’ny Cosfa farany teo ihany koa teo aminy fizaràm-potoana voalohany. Ny fikorontanana kely teo aminy fandaharana ireo mpilalao izay nahazendana ny maro no nambaran’ireo mpitia ny kitra eto Boeny ho fositra ny tsy nahombiazan’ny Fosa junior tamin’iny lalao mandroso natao ny alahady 14 janoary teo teto Mahajanga iny.
Na izany dia efa eo anadalam-panarenana ny lesoka hita ka mampanantena vokatra tsara mandritra ny lalao miverina izay miandry azy ireo any Antananarivo io ny ekipan’ ny Fosa ny Boeny.